.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: တင်ထားပြီးသမျှ ပို့စ်များ
ခုဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ ပို့စ်တင်တာ 100 ပြည့်သွားပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်ရေးပို့စ်လေးတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးနေသလို
ကိုယ့်ထက်တော်သူတွေ ရေးထားတာတွေကိုလည်း ကူးယူမျှဝေထားတာတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှု ၊ ဗဟုသုတ ၊ နည်းပညာ ၊ ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုခုတော့
ရသွားတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်လေးတွေ အမှားလေးတွေရှိရင်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြ နိုင်ပါတယ်။
ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့် သိသလောက် တတ်သလောက်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးနေသူ တစ်ယောက်ပါ။
နောက်ထပ် အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်တွေ နည်းပညာတွေကိုလည်း အချိန်ရရင် ရသလို ရေးတင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။
ခုလိုမျိုး တင်ထားသမျှ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်တွေ စုထားလိုက်တာကတော့ သူငယ်ချင်းတို့  သိချင် လိုချင်တာလေးတွေရှိရင်
အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီး လိုက်ရှာစရာမလိုပဲ ဒီစာမျက်နှာမှာ တစ်ချက်ကလေး ရှာ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သိနိုင်အောင်လို့ပါ။
လာရောက် အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်တွေများ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။          Thurainlin
Flashsongs ကိုယ်တိုင် လုပ်လိုသူများအတွက် ဆော့ဝဲများ နှင့် effect များ
Flash ဝါသနာရှင်များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် SWI ဖိုင်များ
Flash Song တွေကို ဆိုဒ်ပေါ် တင်ချင်သူများအတွက်
ခုန်လိုက်သီချင်းနဲ့ ကိုယ်ပျောက် Flash Song လာပြီ...
Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Effect ဆိုဒ်အသစ်များ...
Happy Birthday! & presents
Ning Theme အလန်းဇယား များ သုံးချင်သူများ အတွက်
For You Ma! Album...
Flash Song လုပ်တတ်ချင်လို့ပါ.
Comment-box က Flash Song ကုတ်ကို အလုပ် မလုပ်အောင် လုပ်နည်း
HTML Colour Code တွေ အလွယ်ယူဖို့ Flash ဖိုင်လေးတွေ..
Mp3 သီချင်းလင့်နဲ့ Flash MP3 Player တစ်ခု လုပ်နည်း.
Mp3 သီချင်းတောင်းဆိုမှု ကဏ္ဍ [ Requestedmp3 ]
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားတဲ့ Swf File ကို Onlineပေါ်ဘယ်လိုတင်ရပါသလဲ
Web Page တစ်ခုကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်..
Ning ဆိုဒ်များမှ Flash ဖိုင်များကို ဖျောက်နည်း
ကျွန်တော့် ဆိုဒ်က ဘောင်ခတ်တာလေး လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်
ဘလော့က Labels တွေကို Scroll Bar လေး ထည့်ချင်ရင်..
Blog ကို Redirect လုပ်နည်း
Flash Song SWF ဖိုင်တွေ လင့်ချိတ်ပြီး ဖွင့်တာ ဒေါင်းလုပ်ပဲကျနေရင်..
ပို့စ်အောက်က ကွန်မန့်ဘောက်စ်ကို ဖျောက်ပစ်ချင်ရင်
Blog ခေါင်းစီး စာသားလေးတွေ ပြေးနေစေချင်ရင်..
Blog က ပို့စ်တွေနဲ့ Gadget တွေကို ဘောင်ခတ်ချင်ရင်
Ning ဆိုဒ်က ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတွေမှာ သီချင်းတင်ဖို့ ဒီဇိုင်းလေး
New Table Design - Created by Thurainlin
Yahoo Web Player For Blog !!
Firefox 22.0 နှင့် Update မတက်အောင် လုပ်နည်း
Blog က စာသားတွေ Select အရောင်ကို ပြောင်းချင်ရင်
Blog မှာ ပို့စ်တွေကို ခေါက်တင်နည်း (သို့) Read More ထည့်နည်း
Blog မှာ Mp3 သီချင်းတွေ တင်ချင်သူတွေအတွက် Table ကုတ်အသစ်
မျိုးကြီး Songs Collection
Posted by Thurainlin at 07:23